Umthendeleko wokuzalwa kukaMariya oyiNtombi
Unqulo & Umoya Imihla Engcwele neeholide
Umhla wokuzalwa kaMama kaThixo
Umthendeleko woKuzalwa kukaMariya oyiNtombikazi , imini amaKristu aseMpuma naseNtshonalanga akhumbuza ukuzalwa kukaMariya, uMama kaThixo, wayebhiyozelwa ekuqaleni kwekhulu lesithandathu. Siyazi ukuba kwi-Saint Romanos i-Melodist, umKristu waseMpuma owaqulunqwa ezininzi iingoma ezisetyenziswe kwiMpuma yamaKatolika naseMpuma ye-Orthodox iiturgy, wabumba ingoma yomthendeleko ngelo xesha.
Umthendeleko wokuzalwa kukaMariya oyintombi uNtombikazi wasasazeka eRoma ngekhulu lesikhombisa, kodwa kuthatha iinkulungwane eziliqela ngaphambi kokuba kugubhiwe kulo lonke elaseNtshona.
Umhla: Septemba 8
Uhlobo lomthendeleko: uMthendeleko
Ukufunda: UMika 5: 1-4A okanye amaRoma 8: 28-30; INdumiso 13: 6AB, 6C; Mateyu 1: 1-16, 18-23 okanye uMateyu 1: 18-23 (itekisi epheleleyo apha)
Imithandazo: Siyabonga uMariya, Umthandazo ngokuzalwa kukaMariya intombi
Amanye amagama kuMthendeleko: Ukuzalwa Kwintombi Enyulukileyo; Umhla wokuzalwa kukaMariya
Imbali yomthendeleko wokuzalwa kukaMariya intombi
Nangona asikwazi ukulandelela umthendeleko weNkwenkwezo yoMariya oyiNtombi ebuyiswe emva kwenkulungwane yesithandathu, umthombo webali lokuzalwa kweNtombi kaMariya ukhulu kakhulu. Ingqungquthela yokuqala yombhalo itholakala kwi-Protoevangelium kaYakobi, iindaba ezilungileyo ezingabhalwanga nge-AD
150. Ukususela kwiProtoevangelium kaYakobi, sifunda amagama omzali bakaMariya, uYoachim noAna, kunye nesithethe sokuba isibini sasingabantwana kwaze kwabonakala ingelosi kuAna waza wamxelela ukuba uya kubamba (ezininzi iinkcukacha ezifanayo zibonakala Kwakhona kwiVangeli ye-Apocrypha yokuzalwa kukaMariya).
Umhla womdabu womthendeleko, ngoSeptemba 8, uwela kanye emva kweenyanga ezilisithoba emva komthendeleko woMngcwabo ongabonakaliyo kaMariya. Mhlawumbi ngenxa yokusondela kwayo kumthendeleko we- Assumption kaMariya , ukuzalwa kukaMariya intombikazi onguNtlondi akugubhiyo namhlanje namhlanje kunye nesiganeko esifanayo ne- Immaculate Conception . Kukho ke, umthendeleko obaluleke kakhulu, kuba uyilungiselela indlela yokuzalwa kukaKristu. Kwakhona umthendeleko ongaqhelekanga, kuba ugubha usuku lokuzalwa.
Kutheni Siyigubha Imini Yokuzalwa KaMariya?
Imithendeleko yabangcwele igujwa ngokuqhelekileyo ngosuku lokufa kwabo, kuba loo mhla bangena kuwo ubomi obungunaphakade. Kwaye, ngokwenene, sibhiyozela ukungena kweNdlovukazi kaMariya ezulwini, ngo-Agasti 15, uMthendeleko we-Assumption .
Kukho kuphela abantu abathathu abazalwa babo ngokuqhelekileyo babhiyozelwa ngamaKristu. UYesu Kristu, eKrismesi ; UYohane oNgcwele uMbhaptizi; kunye noMariya oyiNtombi. Kwaye sinokubhiyozela zonke iintsuku zokuzalwa ezintathu ngenxa yesizathu esifanayo: bonke abathathu bazalwa bengenaSono Sokuqala . UKristu, kuba wayekhulelwe nguMoya oyiNgcwele; UMariya, ngenxa yokuba wayegcinwe ekhululekile kwinqanaba leSono Sokuqala ngesenzo sikaThixo ebusweni bakhe bokuba uyavuma ukuba ngumama kaKristu; kunye noYohane oyingcwele, ngenxa yokuba wayeyintsikelelo esibelethweni ngobungqina boMsindisi xa uMariya, ekhulelwe nguYesu, eza kumnceda u-Elizabeth umzala wakhe ezinyangeni zokugqibela zokukhulelwa kuka-Elizabethe (isiganeko esibhiyozelayo kwiNtlanganiso yokuTyelela ).
Imini Yonke Imiphefumlo Nokuba Kutheni AmaKatolika Agugule
Ixesha le-Advent kwiCawa yamaKatolika
Kutheni kuLwesithathu weSonto eliNgcwele libizwa ngokuba yiTekisi?
Ziziphi iiNkcazo zamaLatoriki zeCawa yamaKatolika?
Iintsuku ezingama-40 zeLente
Yintoni iSonto Lwesithathu?
NgeCawa lePentekoste kunye nokuza koMoya oyiNgcwele
Umculo weLatin kwiSuku loBawo
Iifomthi Zakha Njani Izilwanyana Zabo Ezikhuni
I-Grammar Lequel (Yiyiphi)
Iimeko zeengxaki (intetho)
I-Teardown entsha ye-Radio eLawulayo entsha
Yiyiphi i-Redesigned PSAT?
Into Omele Uyazi Ngayigumbi leRosetta
Juni Izihloko, iHholide imisebenzi, kunye neMicimbi yabaFundi abaQalayo
IMacCoy Pottery Marks
Yintoni iSiliva yeSiliva?
Ukudlala kwevidiyo kwiChina
Nceda AbaFundi Bakho Baphumelele Iimpondo Zabo ngeNjongo yokuCwangcisa iNjongo
Ukwakhiwa kweQumrhu loLuntu
Iintetho ezili-10 zePentatonix